Edgar Allan Poe. Makore 209 mushure mekuzvarwa kwake. Mamwe emitsara yake | Zvazvino Zvinyorwa
Edgar Allan Poe. Makore 209 mushure mekuzvarwa kwake. Mamwe emitsara yake
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Novela, Nhema nhema, Nhetembo, Nyaya, Zvinotyisa
Edgar Allan Poe kunyora. NaEdouard Manet.
Hongu nhasi ndizvo 19 yeJanuary, zuva rakakura rezvinyorwa zvepasirese nekuti Edgar Allan Poe anotendeuka 209. Asi mukusingaperi kwayo icho hachisi chinhu. Iyo nyanzvi yeBoston ichiripo, mumanoveli ake, nyaya uye nhetembo. Yakanyanya kutaurwa, kudzidza, kuongororwa uye kupokana nezve Poe zvekuti zvinokurudzirwa kuti uenderere mberi nekuiverenga. Nakidzwa nekunyongana uye kutya zvakanyanya sekuda uye kushushikana uko basa rake rese rinobuda. Gore rakapera raive kukwazisa kwangu kwekutanga kuna Poe mune ino blog uye yechipiri iyi kurangarira mamwe emitsara yake.
Munyori, mudetembi, mutsoropodzi uye mutori venhau vane rudoVabereki vake, vaifamba vatambi vemitambo, vakafa achiri mudiki. Akarererwa neshamwari yemhuri, John Alan, uyo kunyangwe iye asingafarire aisakwanisa kudzivirira Poe kubva pabasa rake kuti azvipire kunyora. Mushure mekutamira ku Boston akatanga kutumira asingazivikanwe. Ikoko akazova mupepeti wepepanhau Maodzanyemba Baltimore Mutumwa, uye akaroora muna 1835 (ane makore 26) pamwe nehama yake mudiki Virginia Clemm (ane makore gumi nematatu chete) .ç
Izvo zvaakarwara nazvo tuberculosis zvaizomaka izvo zvoga kuora mwoyo Kubva kumunyori. Kunetsekana kukuru kwekurwara kwemukadzi wake kwakamutungamira kune doro uye zvinodhaka. Kunyangwe mushure mekufa kwake, Poe akaedza kuzviuraya ne laudanum asi akairutsa uye akakwanisa kupora.
Zvisinei, doro nezvinodhaka hazvina kumusiya. Poe akapfuura mukati Baltimore nemakore makumi mana chete. Chikonzero chaicho chekufa kwake hachina kumbojekeswa uye pakati pezvimwe zvikonzero, cholera, zvinodhaka, chirwere chemwoyo, tibhii kana kana kuyedza kuzviuraya kwechipiri kwakafamba zvakanaka kwakatariswa. Zvichida vese.
Mamwe emitsara yake
Awa aive mazwi ake aakataurira ake Tete Maria Clemm mushure mekufirwa nemukadzi wake nechirwere cherurindi.
Tinogona kungofa tese. Zvino hazvibatsiri kutaurirana neni; Handichagona kuitora zvakare, ndinofanira kufa. Sezvo ini ndakatumira Eureka, Handina chido chekuramba ndiri mupenyu. Ini hapana chimwe chandinogona kupedza. Nekuti hupenyu hwako hwerudo hwaitapira, asi isu tinofanira kufa pamwe chete. (…) Kubva zvandakave pano, ndakambove mutirongo kamwechete nekuda kwekudhakwa, asi panguva iyoyo ndakanga ndisina kudhakwa. Yakanga iri yeVirginia.
Asi kwaive nemimwe mitauro yakawanda yatinoziva tese. Makadii:
"Nzira chete yekuti munhu achengetedze rusununguko rwake kugara akagadzirira kufira iyo."
"Mumimhanzi pamwe panosvika mweya padyo padyo nechinangwa chikuru icho chainorwira kana ichifemerwa nemanzwiro enhetembo: kugadzirwa kwekunaka kunoshamisa."
"Sayenzi haisati yatidzidzisa kana kupenga ndiko kwakanyanya kukunda kwehungwaru."
"Dai ndaizobvunzwa kuti nditsanangure izwi rekuti hunyanzvi mumazwi mashoma, ndaizodaidza kuti kubereka kweizvo pfungwa dzinoona muchisikirwo kuburikidza nechidzitiro chemweya."
"Rufu runotorwa hushingi kumeso ndokuzokokwa kunwa."
"Dhimoni rezvakaipa nderimwe remafungiro emoyo wemunhu."
"Chero chipi chavabereki, runako, mukukura kwayo kukuru, zvinokonzeresa mweya inosvimha misodzi."
"Saner ndiye anobvuma kupenga kwake."
"Ndakava munhu anopenga, ane nguva refu dzakapinza dzenjere."
"Hazvigoneke kufungidzira chimwe chinhu chinoshungurudza kupfuura icho chemunyori."
"Runako rwemhando ipi neipi mukuratidzwa kwayo kwepamusorosoro kunofadza mweya unoziva kuchema."
"Mufaro hausi musainzi, asi mukutora kwesainzi."
"Mumoyo yevanonyanya kushaya hanya varume pane tambo dzisingagone kubatwa pasina manzwiro."
"Bvudzi rakachena nderezvakaitika kare."
"Avo vanorota masikati vanoziva zvinhu zvakawanda zvinopukunyuka avo vanorota chete husiku."
"Zvichida iko iko kureruka kwechinhu kunotitungamira mukukanganisa."
"Rufu rwemukadzi tsvarakadenga saka hapana mubvunzo kuti inyaya yenhetembo pasi rose, uye zvakaenzana pasina mubvunzo kuti miromo inokodzera yechinhu ichocho ndeiya yemudiwa akafirwa."
"Hupenyu chaihwo hwemunhu hunofara kunyanya nekuti anogara achitarisira kuti uve munguva pfupi."
"Mamiriro mana emufaro: rudo rwemukadzi, hupenyu mune yekuvhurika mhepo, kusavapo kwechishuwo chose uye kugadzirwa kwerunako rutsva."
Usatize rudo; zvichakubata.
"Mabasa ese eumhizha anofanira kutanga ... kumagumo."
"Ini handityi njodzi zvachose, asi mhedzisiro yekupedzisira: kutya."
"Pane chimwe chinhu murudo uye nekuzvipira rudo rwemhuka iyo inosvika yakananga mumoyo weuyo anowanzo kuravira hushamwari hwenhema uye kutendeka kusimba kwemunhu."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Edgar Allan Poe. Makore 209 mushure mekuzvarwa kwake. Mamwe emitsara yake
Mabhuku anotengesa zvakanyanya munhoroondo
Pfupiso yebhuku "El camino" naMiguel Delibes